Kamerona: Manao fanadiovana i Yaoundé mialohan’ny fahatongavan’ny Papa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2019 13:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Deutsch, Español, Italiano, Swahili, Português, English
Ho any Kamerona ny Papa Benoit XVI ny 17 ka hatramin'ny 24 Martsa 2009. Manosika an'ireo tomponandraikitra handray fepetra ifotony mikasika ny fanadiovana izany, hoy ny fanamarihan'ny blaogy Griet,Thorsten, Jara and Lisa [teny anglisy]:
1 Ireo tranotranokely rehetra, ireo trano, sy ireo tranohazon'ny mpivarotra ka tsy dia tsara rafitra loatra dia narodana tamin'ny fiarabe mpitrongy tany ‘bulldozer’ avokoa. Mandalo ilay fitaovana goavam-be, manadihady ny misy anao tranohazo/trano/na zavatra hafa, ary rehefa tsy azoazon'ny mpamily ilay fiarabe izany, dia potehany fotsiny miaraka amin'izay rehetra ao anatiny. Herinandro no nanombohan'io tao afovoan-tanàna. Tampotampoka teo, tsy nahitana an'ireo mpivarotra mandehandeha intsony ny arabe, nanjavona avokoa ireo tranotranokely teo an-toerana, sy ny sisa… Amin'izao fotoana izao [ny asa] dia miitatra hatrany amin'ny seranam-piaramanidina.
2 Misy jiro vaovao be mitaratra ny làlana mankany amin'ny seranam-piaramanidina. Saingy amin'ny faritra mitondra mankany amin'ny afovoan-tanàna irery ihany.
3 Amin'ny Talata, azo antoka – mbola ho fantarina ny an'ireo andro hafa – dia ho tapaka ny làlana miala eny amin'ny seranam-piaramanidina hatreny afovoan-tanàna. Fanamarihana: ny hariva no ho tonga ny papa, saingy tsy maintsy vao maraina dia efa akatona ny làlana. Noho izany dia tsy ho afaka handeha hiasa ny olona na miverina, na handeha an-tsekoly, sy ny sisa….
Misy rohy mankamina blaogy hafa ihany koa ao anatin'ilay lahatsoratra, dia ny an'ny fianakaviana iray mpila ravinahitra, Sander Elke en Milan [néerlandais] izay mampiseho ny sary fandrodanana ireo tranotranokely manamorona ireo arabe ao Yaoundé.
Nitarika adihevitra teo amin'ireo bilaogy roa tantanina mpila ravnahitra ao Kamerona ireo fandrodanana ireo. Συγκακοπαθησον, bilaogy iray amin'ny teny anglisy soratan'ny Amerikàna misionera iray, nanoratra mikasika ireo fiovàna endrika tao Yaoundé vokatry ny fandolavan'ny papa ao Kamerona.
Koa, ahoana ny fahatsapako manoloana izany rehetra izany? Tsara ny hoe mahazo ainga vao amin'izany ny tanàna – azo antoka fa vokatr'izany dia toy ny hoe tsara kokoa ny fahitàna ny zavatra rehetra, ary ho mora sy tsy hampidi-doza ny fifamoivoizana na ny fikarohana taxi noho ny fisian'ireo jiro be mitaratra eny an-dalambe amin'ny alina – saingy tena mampalahelo fa tsy maintsy mandalo amin'ny fandravàna ny fombam-piainan'ny olona ity fanadiovana ity. Indrisy fa tsy mahalala n'inon'inona momba izay “fitsipika” ireo olona ireo, ny sasantsasany ninia fotsiny izao, ary dia mizaka ny vokany izy ireo ankehitriny. Ny mampalahelo dia toy namela ny gaboraraka hisy (mety hatramin'ny 10 taona na mahery aza) ireo tomponandraikitra, mandrapitrangan'ny zavatra tena manan-danja, sahala amin'ny fahatongavan'ny papa. Raha nalàn'izy ireo arakaraka ny nipoirany ireo endriny ireo, dia tsy hisy mihitsy ny karazana famotehana ny fiveloman'ny olona tahaka izao. Hatrany hatrany, heveriko fa ny lalàna dia hijanona ho lalàna hatrany, eny fa na dia tsy ampiharina aza izy.
Io fijery io dia tsy niraisana, izay no farafahakeliny azo lazaina, ho an'ilay solontena britanika iray izay manoratra blaogy ao amin'ny Our Man in Cameroun. Tsotra ny fanehoankeviny ao anatin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Missionnaire Impossible [anglisy].
Ireo talantalana teny an'arabe dia tafiditra anatin'ny endri-piainana eto. Misy izany na aiza na aiza. Mora ny mikiry biby milaza fotsiny fa tsy ara-dalàna izy ireo, nefa mety ho fotodrafitrasa vita tamina akora mafy izy ireny . Fanampin'izany, raha toa izy ireo tsy ara-dalàna, azoko sary an-tsaina fa navela hijanona sy hiasa izy ireny satria nisy , tany ho any, olona nandray tsolotra mahazatra nitentina farantsa an'aliny.
Mifofotra ny olona eto. Afaka matoky ianao fa tsy dia miova tanana matetika ireo fotodrafitrasa ireo, ary ao anatin'ny firenena ahitànay orinasa sy ny mpandraharaha mpanamaivan-javatra… fomba iray hampaherezana azy ireo ity. Raha miombona hevitra amin'izay rehetra nosoratako ianareo ary hitanareo, sahala amin'izay hitako, fa ny fijerin'ity misionera ity dia mitovy amin'ny an'ny olona iray tsy mahalala na inona na inona akory, azafady manorata fanehoankevitra. Tsy eto aorian'ity, fa any amin'ny blaogin'ilay misionera.
Na izany aza, naneho ny heviny teo amin'ny blaogy Our Man in Cameroon mikasika ity tantara ity ihany ireo mpamaky. Nitranga ireo fanehoankevitra, tamin'ny fotoana izay nidiran'i Karis, vadin'ilay misionera, an-tsehatra mba hiaro ny vadiny [teny anglisy]:
Oadraaay! Tsy noeritreritiko mihitsy fa ny vadiko no mety hiteraka sahoa tahaka izao. Mihevitra aho fa indraindray dia ireo mahalala anay irery ihany no mamaky ny blaoginay, ary izy ireo no mahalala hoe ahoana no handraisana izay soratanay, fa tsy potipotehana anatina andalana isan'andalana, nefa tsy mahafantatra anay akory.
Trav, misaotra tamin'ireo teny tsara nataonao. Papa A, misaotra tamin'ny hatsikana. Vitanao foana ny mampitsiky ahy. Iriako raha ianareo rehetra izay naneho hevitra teto sy teo amin'ny blaoginy no mahalala ny vadiko – dia tsy ho henjana ianareo amin'ny fandrasarasàna ireo fehezanteny. Imbetsaka izahay mivady no niady hevitra mikasika ny mampaharikoriko ny fanesorana amin'ireo olona ny antom-pivelomany, izany rehetra izany dia atao noho ireo andro vitsy monja andalovan'ny papa. Raha nandalo tany an-tanandehibe izahay tamin'ny Alatsinainy ka nahita ireo entana natsipy tany anatin'ireo fiarabe, naloiloy aho. Efa imbetsaka no nilazanay hoe : “Ahoana no fomba hisakafoanan'ireo olona ireo anio alina? Ary rahampitso, ary raha afaka ampitso?” Mety mbola hihoatra lavitra an'izay aza… Ary androany, hitako izy nanampy olona tamin'ny famindràna ireo milina fanjairan-dry zareo, ny latabatra, harona fasiany ny entany, tery lavidavitra kokoa tamin'ny làlanay, raha ireo tomponandraikitra kosa nandalo miaraka amin'ny fiarabe mpitrongy tany ‘bulldozer’. Tsia, tsy mbola nanisy tsindrim-peo loatra tato anatin'ity lahatsoratra ity mihitsy mikasika an'ireo adihevitra rehetra nifanaovanay na ireo asanay, fa tsy hita moa… tsy midika akory izany fa hoe tsy miraharaha ny olona eto akory ny vadiko an! Azoko atao ny mandresy lahatra azy hanoratra lahatsoratra iray hafa, saingy tsy azoko antoka, satria tsara kokoa ny mijanona hatreo, mba tsy ho rotika fanindroany indray. Vady iray izay manohana mafy ny vadiny mahafinaritra anefa tsy ho afaka hanova ny fisainana akory.
sy nitsahatra hatreo ireo fifanakalozana. Naka endrika tsy nampoizina teny anaty tontolon'ny bilaogy ity fitsidihan'ny papa ity…